ဂျေမောင်မောင် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / ဂျေမောင်မောင်
Category Archives: ဂျေမောင်မောင်
ဂျေညီညီ – လိုက်ဖ်ရှိုး
၁။အလွမ်းကဖေး ၂။အိပ်မက်မက်တယ် ၃။ဒီမိုး ၄။အချစ်နဲ့ပတ်သတ်သူတိုင်း ၅။အသည်းပေါက်မတက်ချစ်တယ် ၆။ပလက်ဖောင်းရှိုး ၇။အိပ်မက်ထဲကကျွှန်တော် ၈။စွဲနေပြီ ၉။ပြောတက်လိုက်တာ ၁၀။မင်းရှိမှ ၁၁။မဝေးချင် ၁၂။အမှား Credits to Jonesein -> mmcp Direct Link
October 29, 2011 လူသား ဂျေမောင်မောင် ဂျေညီညီ ဂျေညီမလေး Myanmar Artist Leaveacomment
တေးရေးဆရာ မင်းချစ်သူရဲ့ အသည်းကွဲမြို့တော်သီချင်းကို ဂျေမောင်မောင်၊ အာဇာနည်တို့ရဲ့ သီဆိုမှုတွေပါ။ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ဘယ်လိုနားထဲကိုစီးဝင်လာသလဲဆိုတာ နားဆင်ရတာပေါ့ဗျာ … ပဲ့တင်သံအနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ J Maung Maung R Zarni
June 1, 2011 လူသား ဂျေမောင်မောင် Rဇာနည် Leaveacomment
လျှပ်စစ်မိုးကောင်းကင် (၁) ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ ဂျေမောင်မောင်၊ ချစ်ကောင်း
၀၁။ အသည်းကွဲမြို.တော် (ဂျေမောင်မောင်) ၀၂။ ထွက်မသွားနဲ. (ဂျေမောင်မောင်) ၀၃။ ပထမဆု (ဇော်ဝင်းထွဋ်) ၀၄။ ဂန္တ၀င်စိမ်း (ဇော်ဝင်းထွဋ်) ၀၅။ နှလုံးသားရဲ.ကျန်းမာရေး (ချစ်ကောင်း) ၀၆။ အဆွေးလမ်းပေါ်မှာ (ချစ်ကောင်း) ၀၇။ စိတ်ကူးတောင်ပံများ (ဂျေမောင်မောင်) ၀၈။ အကုန်သာယူလိုက် (ဇော်ဝင်းထွဋ်) ၀၉။ အတူတူနေလိုက်စို့ (ချစ်ကောင်း) ၁၀။ အဓိကကွက်လပ် (ချစ်ကောင်း) ၁၁။ မမဆိုး (ချစ်ကောင်း) ၁၂။ အလွမ်းညရဲ့အသံ (ဂျေမောင်မောင်) ၁၃။ အရွယ်လွန်အချစ် (ဇော်ဝင်းထွဋ်) ၁၄။ အစမ်းသပ်ခံအသည်းနှလုံး (ဇော်ဝင်းထွဋ်) ၁၅။ စဉ်းစားကြည့် (ဂျေမောင်မောင်)
July 6, 2010 Snuo Mwoani အခွေ (အများ) ဂျေမောင်မောင် ဇော်ဝင်းထွဋ် ချစ်ကောင်3းComments
ဂျေမောင်မောင် (နေလိုလလိုသီချင်းများ) မင်းမင်းလတ် ၏ သီချင်းများ
နေလိုလလို မွှေးမွှေးသင်္ကြန် သင်္ကြန်ပြီးရင်ခိုးမယ် ငှက်ပျောသီးစားသူများ ၀က်မလွတ် ဒေါင်ဒေါင်မြည် ဘာညာဘာညာဘာညာ မင်းမင်းလတ်၏မဟာဗျုဟာ အနားပြာ ခွေးဖြူမ ရည်းစားများတဲ့သူ သုံးကိုယ်ခွဲ
February 22, 2010 swordfish အခွေ (တကိုယ်တော်) ဂျေမောင်မောင်2Comments
ဂျေမောင်မောင် – (တစ်ကိုယ်တော်)
တေးသံရှင် ဂျေမောင်မောင် ရဲ့သီချင်းများ စုစည်းမှု ဖြစ်ပါတယ်….။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့…တန်ဖိုးရှိတဲ့ …..သီချင်းများ ဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း….၊ တချို့ သီချင်းတွေရဲ့ နာမည်တွေကို … အသေအခြာ မသိရှိတာက တစ်ကြောင်း…၊ ကိုယ်တိုင် ပြီးပြည့်စုံအောင် နားမထောင်ဖြစ်သေးတာက တစ်ကြောင်း…စသည့် အကြောင်းကြောင်းတို့ ကြောင့် တန်ဖိုးရှိသော သီချင်းများ….နာမည်တလွဲတချော်ဖြစ်မှာ…စိုးရိမ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်… သီချင်းနာမည်များ ရေးထားပေးနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို ခွင့်လွတ်ပေးပါရန်နှင့်…. တေးချစ်သူများ….တေးချစ် ပရိတ်သတ်များကို တောင်းဆိုချင်တာလေး တစ်ခုကတော့….၊ တေးသီချင်း နာမည်များကို တတ်နိုင်သလောက်…သိသလောက်…ပြန်လည်ပေးပို့ ပေးပါရန်… တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်… ခင်မင်လျက်… . Thanks, Dr.TT & Dr.THM (Ko Thaw Gyi) . Download Link
December 23, 2008 sayargye အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဂျေမောင်မောင် Myanmar Artist 1 Comment
ဂျေမောင်မောင် – စင်ပေါ်ရောက်ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်များ
၁။ ကျွန်တော်မကောင်းဘူး ၂။ မျှော်တော်ယောင် ၃။ အချစ်ရေ့ ၄။ နေပါဦး ၅။ ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ ၆။ သိပ်ချစ်လွန်းတော့လည်း ၇။ မင်းဟာနတ်သမီး ၈။ အသည်းစွဲ ၉။ ကြီးမှဝက်သက်ပေါက်ရင် ၁၀။ စန္ဒီ ၁၁။ သစ္စာရှိကြေး ၁၂။ သတိရနေတဲ့သီချင်း
November 2, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ဂျေမောင်မောင် Myanmar Artist 1 Comment
ဂျေမောင်မောင် ရဲ့ ဂျေမောင်မောင်
၁။ အရူးအမူးလေးပဲကလေးရယ် ၂။ မုန်းမေ့ဖို့ ခက်တယ် ၃။ တစ်ယောက်မျက်နှာ် တစ်ယောက်ကြည့်ကာ ၄။ လာခဲ့မယ် မင်းဆီကို ၅။ သိပ်ချစ်လွန်းတော့လည်း ၆။ သတိရနေတဲ့သီချင်း ၇။ အသည်းကွဲမြို့တော် ၈။ ဘယ်သူကြောင့်လဲ ၉။ အတောင်ပံကျိုးတဲ့ငှက် ၁၀။ မင်းမှမင်း ၁၁။ ထွက်မသွားနဲ့ ၁၂။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝေး ၁၃။ စဉ်းစားကြည့် ၁၄။ စောင့်နေမယ်
November 2, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ဂျေမောင်မောင် Myanmar Artist2Comments